ओस्टियोपैथ भनेको के हो? | गठन र अध्ययन
ओस्टियोपैथ भनेको के हो?
माइट निक्यूसा | 03/12/2021 23:49 | प्रशिक्षण
ओस्टियोपैथ भनेको के हो? त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न पेशेवरहरू छन्। र ओस्टियोपैथ ती मध्ये एक हो। स्पेनको ओस्टियोप्याथको रजिस्ट्री यस क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर विकास गर्न आवश्यक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने पेशेवरहरू मिलेर बनेको छ। यो एक गैर नाफा संस्था हो भनेर औंल्याउनुपर्छ। यसको भागको लागि, स्पेनको ओस्टियोप्याथको महासंघले विभिन्न विशेष पेशेवरहरूलाई एकसाथ ल्याउँछ यस परिधिमा। सदस्यहरूले EFO (European Federation of Osteopaths) द्वारा संकेत गरिएका आवश्यकताहरू पूरा गर्छन्।
प्रत्येक चिकित्सा पेशेवरले निदान गर्नको लागि एक विशेष प्रक्रिया पूरा गर्दछ। प्रभावकारी उपचार सिफारिस गर्नको लागि यसको नामकरण कुञ्जी हो। संकेत गरिएको प्रोफाइलको मुख्य काम गर्ने उपकरण के हो? हातहरू।
1 ओस्टियोपैथले शरीरलाई एकाइको रूपमा विश्लेषण गर्दछ
2 एक ओस्टियोपैथ र एक भौतिक चिकित्सक बीचको भिन्नता
3 ओस्टियोपैथीमा विशेष पाठ्यक्रमहरू कहाँ लिने
ओस्टियोपैथले शरीरलाई एकाइको रूपमा विश्लेषण गर्दछ
यो ध्यान दिनुपर्छ कि ओस्टियोपैथी एक अनुशासन हो जुन अपरंपरागत चिकित्सा को क्षेत्र को एक हिस्सा हो। शरीरले समग्र परिप्रेक्ष्य प्राप्त गर्दछ किनकि सम्पूर्ण तत्वको रूपमा प्रत्येक तत्व बीचको सम्बन्ध हुन्छ। छोटकरीमा, मानव शरीरको विश्वव्यापी दृष्टि यस अनुशासनको ढाँचा भित्र एक आवश्यक सिद्धान्तबाट सुरु हुन्छ: शरीरलाई एकाइको रूपमा अवलोकन गरिन्छ। अर्कोतर्फ, भावनात्मक विमानसँग जोडिएको एकाइ। यसरी, केही शारीरिक असुविधाहरूको उत्पत्ति मनको अवस्थासँग सम्बन्धित कुनै न कुनै पक्षमा हुन सक्छ।
उदाहरण को लागी, लामो समय सम्म तनाव को रूप मा संचित तनाव को कारण शारीरिक दुखाइ हुन सक्छ। संगतको प्रक्रिया मार्फत, शरीरले आफ्नो सन्तुलन पुन: प्राप्त गर्छ (ओस्टियोपैथीले संकेत गरे अनुसार)। भावनात्मक पीडाले शारीरिक असुविधामा आफ्नो छाप छोड्न सक्छ। यस अनुशासनको माध्यमबाट, सम्भावित गतिशीलता डिसफंक्शनहरूमा डुब्ने सम्भावना उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण, प्रभावकारी उपचारको माध्यमबाट, तिनीहरू आन्दोलनहरू सुधार गर्छन्।
एक ओस्टियोपैथ र एक भौतिक चिकित्सक बीचको भिन्नता
ओस्टियोप्याथीको क्षेत्रमा काम गर्ने पेशेवरले बिरामीलाई अर्को क्षेत्रको विशेषज्ञलाई बुझाउँछ जब उनी आफ्नो मामलामा उपस्थित हुन योग्य छैनन्। यो औंल्याउनु पर्छ कि ओस्टियोपैथ र बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता छ फिजियोथेरापिस्ट. पछिल्लोले विश्वविद्यालयको डिग्री पूरा गरेको छ। यस अवधिमा उनले आफ्नो पेशाको विकासका लागि आफूलाई तयार गरेका छन् । यही कारणले गर्दा धेरै बिरामीहरूले आधिकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त डिग्रीद्वारा समर्थित सीप, क्षमता र ज्ञान भएको विशेषज्ञसँग आफ्नो मामलामा परामर्श लिन रुचाउँछन्।
हाल, यस शाखामा विशेषज्ञ बन्नको लागि ओस्टियोप्याथीमा कुनै विशेष डिग्री छैन। यसलाई वैकल्पिक उपचारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अपरंपरागत चिकित्साको यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्रोफाइल स्वास्थ्य अध्ययन पूरा गरेका र पाठ्यक्रमहरू वा स्नातकोत्तर पूरा गरेर आफ्नो तयारी पूरा गरेका पेशेवरहरूको हो। उदाहरणका लागि, केही अनुभवी शारीरिक चिकित्सकहरूले ओस्टियोपैथीको क्षेत्रमा पनि सेवाहरू प्रस्ताव गर्न आफ्नो प्रशिक्षण अद्यावधिक गर्छन्।
ओस्टियोपैथीमा विशेष पाठ्यक्रमहरू कहाँ लिने
अक्सर, एक रोगले लक्षणहरू र लक्षणहरू मार्फत प्रकट हुन्छ जुन प्रभावित व्यक्तिको जीवनको गुणस्तरलाई सर्त गर्दछ। यद्यपि, ओस्टियोपैथीको दृष्टिकोणबाट, यो ध्यान दिनु पर्छ कि उपचार कारण मा कार्य गर्दछ। भनिएको कारण एक हो जुन यसले निम्त्याउने पीडासँग सम्बन्धित छ।
मर्सिया विश्वविद्यालयको ओस्टियोपैथी विश्वविद्यालय स्कूलले व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। यसले स्थायी प्रशिक्षणलाई बढावा दिने पाठ्यक्रमहरूको सूची प्रदान गर्दछ। के तपाईं आफ्नो करियरलाई त्यस दिशामा बढाउनको लागि यस क्षेत्रमा विशेषज्ञ बन्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ अन्य प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन् जुन तपाईंको सिकाइमा साथ दिन सक्छन्। ओस्टियोपैथीको म्याड्रिड स्कूल अर्को सन्दर्भ केन्द्र हो। यसको प्रशिक्षण प्रस्ताव फिजियोथेरापी मा स्नातक को उद्देश्य हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » प्रशिक्षण » ओस्टियोपैथ भनेको के हो?
साझा प्रशासनिक प्रक्रिया के हो?
ओस्टियोपैथी भनेको के हो